IPhone 5s कसरी अनलक गर्न। के तपाईं आफ्नो आईफोन लागि पासवर्ड बिर्सनुभयो भने
प्रविधिको, सेल फोन
आज सबै इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित सुविधाहरूको छ। उदाहरणका लागि, खोल्ने, ढाँचा, तपाईं प्रदर्शन गर्न, र स्क्यानको औंठाछाप पहुँच चाहेको ढाँचा मा लागि विभिन्न पासवर्ड।
IPhone पनि यी सबै सुविधाहरू छ। उनीहरूसँग एक प्रयोगकर्ता यन्त्र, आफ्नो भनेर केही हराउछ व्यक्तिगत डाटा र जानकारी फोनमा भण्डारण सुरक्षित गरिनेछ।
तर तपाईं के आफ्नो पासवर्ड बिर्सनुभयो भने? कसरी यस्तो मामला मा iPhone 5s अनलक गर्न?
र यस बारे, र हराएको फोन, अघिल्लो मालिक द्वारा बन्द काम गर्ने बारे, यस लेखमा कवर हुनेछ।
उपकरण कसरी लक गर्छ?
फोन लक कि, सुरु गर्न (पाठ्यक्रम र, यो भण्डारण गरिएका सबै डाटा) तरिका को एक किसिम हुन सक्छ। यो4अङ्कहरू संख्यात्मक पासवर्ड हुन सक्छ, र औंठाछाप स्क्यान मार्फत लक। तपाईं डाटा लक गर्न भूल र कसरी आफ्नै iPhone 5s अनलक गर्न थाहा छैन कि चिन्ता गर्न उत्तरार्द्ध विधि को मामला मा, यो आवश्यक छ। यो गृह बटन एउटा औंला ल्याउन बस पर्याप्त हुनेछ, र उपकरण नै तपाईं पहिचान हुनेछ।
निस्सन्देह, स्क्यान गरिएको खाली संग ताला विधि धेरै सजिलो छ - यो एक प्रयोगकर्ता रूपमा सही पहिचान समावेश, र प्रतिद्वन्द्वीको गरेको औंला प्रतिक्रिया छैन। एकै समयमा, पाठ्यक्रम, प्रमाणीकरण को यो विधि मात्र साथ अनुमति दिएको छ को iPhone को मोडेल 5s र नयाँ; चिनियाँ iPhone 5s खातामा लिएको छैन - कुनै औंला स्क्यानर छ।
के अनलक गर्न आवश्यक छ?
फोन मा एक पासवर्ड सबै डाटा "बंद" एक यस्तो तरिका मा डिजाइन गरिएको छ। सबै प्रयोगकर्ता पछि छोड्दा कि, तेस्रो पक्षहरूबाट प्रयोग गर्न सकिँदैन - यो सबै फोटो, सम्पर्क, पासवर्ड, कार्यक्रम हो। तपाईं अनलक पछि काम गर्ने छैनन् यो जानकारी राख्न - तपाईं आफ्नो उपकरण अनलक गर्न चाहनुहुन्छ भने मनमा यो राख्नुहोस्।
एक पीसी जडान लागि केबल, स्थापित iTunes छ कि कम्प्युटर, वा iCloud पहुँच छ कि कम्प्युटर - तपाईं अनलक गर्नुपर्ने कि धन को लागि रूपमा।
हामी आवश्यक हुनेछ भनेर उपकरण को सेट iPhone 5s कसरी अनलक गर्न मा निर्भर गर्दछ। वास्तवमा, एक पटक हामी यस लेखमा दुई विधिहरू वर्णन।
अनलक गर्न संभावना
अझै यो तपाईं आफैलाई बाहिर ले सबै कार्यहरू कि उल्लेख गर्नुपर्छ। तपाईं बन्द खोल्न सेवाहरूको प्रावधान लागि एप्पल सेवा केन्द्रमा सम्पर्क गर्न आवश्यक छैन। यसलाई सरल र सजिलो छ।
मुख्य कुरा तपाईं काम गर्नेछ जो फोन, पहिले नै निर्दिष्ट कम्प्युटरमा जडान, र, त्यो हो, चाहन्थे सूचीमा थिएन। अन्यथा, यदि कसैले एउटा iPhone 5s फेला छ, कसरी यो तपाईं निजी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर अनलक गर्न, हामी थाहा छैन। तपाईंले उपकरण पुनर्स्थापना, यो सेवा iCloud प्रदर्शित हुनेछ, र पूर्व मालिक आफ्नो फोनबाट संकेत देख्न हुनेछ। यस मामला मा, पाठ्यक्रम, यो सबै भन्दा राम्रो बस वर्तमान मालिक एकाइ फर्कन छ। त्यसैले फिर्ता रिकभरी गर्न।
DFU मोड के हो
पहिलो विधि पूरा रिकभरी फोन गर्न छ। यो सबै डाटा हटाउन र उपकरणको "रिसेट" हो। DFU मोडमा आईफोन अनुवाद गर्न आवश्यक हुनेछ यो गर्न।
यो विशेष मोड उत्तरार्द्ध सञ्चालन प्रणाली लोड गर्छ जब फोन को एक राज्य हो। वास्तवमा, यो क्षण मा यो केवल कम्प्युटरमा जडान गर्न सक्षम छ जो एक खोल छ। यो यस्तो यो उपकरणको फर्मवेयर अपडेट गर्न आवश्यक छ जब रूपमा, आपतकालीन अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ।
पहिचान DFU मोड, को iPhone 5s कसरी अनलक गर्न भन्दा अन्य केहि लागि आवश्यक छ, सम्भव द्वारा प्रदर्शनमा एप्पल लोगो छ। सबै, कुनै अन्य "जीवनको संकेत" मोडेल लागू हुनेछ।
हेर्नुहोस् DFU सरल - त्यसपछि बटन «पावर» जारी, तपाईंको कम्प्युटरमा उपकरण जडान त्यसपछि «होम» बटन र 10 सेकेन्ड को लागि «पावर» तल पकड, तर पकड गर्न «होम» जारी। त्यसपछि फोन माथिको नामित मोड जानेछ।
कसरी iTunes मार्फत आईफोन अनलक गर्न?
(- हाम्रो आईफोन पुनर्स्थापना अर्थात्) अब, वास्तवमा, हामी प्रक्रिया अनलक गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यो गर्न, iTunes कार्यक्रम (फोन कम्प्युटरमा जडान र DFU मोडमा छ सम्म) नेभिगेट, र त्यसपछि पत्ता लगाउनुहोस् "पुनर्स्थापना आईफोन»। यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र फोनबाट सबै जानकारी मेटिने सम्म प्रतीक्षा गर्नुहोस्। तपाईँको फोन पुनः सुरु, तपाईं स्क्राच देखि यो काम सुरु गर्न सक्नुहुन्छ (यो एक चिनियाँ iPhone 5s नभएसम्म) पछि - उपकरण सबै डाटा खाली गरिनेछ।
प्रयोग गरेर "फेला आईफोन» फोन अनलक
त्यहाँ अर्को को iPhone 5s कसरी अनलक गर्न को, अधिक सरल तरिका हो। यसलाई प्रयोग गर्न, तपाईंले टाढैबाट आफ्नो मोबाइल फोन व्यवस्थापन गर्न अनुमति दिने, बादल सेवा iCloud फाइदा लिन आवश्यक छ। यसलाई मा तपाईँले "मेटाउने आईफोन।" देख्न सक्नुहुन्छ यो उपकरण तपाईंको हातमा छ घटनाको लागू गर्न सकिन्छ र तपाईंले यसलाई एक पासवर्ड प्राप्त गर्न चाहन्छु।
यो एउटा बटन को एक क्लिकमा प्रभावकारी गरिन्छ। किनभने तपाईंको खातामा पाठ्यक्रम व्यक्तिमा iCloud पहुँच, छैन यस विधि यो काम गर्ने छैनन्, - र, को पाठ्यक्रम, यदि कसैले एउटा iPhone 5s फेला छ, कसरी अनलक गर्न यो सोच्छ। एकै समयमा, तपाईंले आफ्नो उपकरण गुमाउनुभयो भने, तपाईं "हानि मोड" एउटै मेनुमा, geopositioning प्रयोग गरेर तपाईँको फोन खोजी हुनेछ जो थिच्न सक्नुहुन्छ। साथै, यस्तो शासन पनि एक असुरक्षित मिसिन मा एक पासवर्ड सेट गर्न सक्नुहुन्छ, साथै मोबाइल उपकरणको नयाँ मालिक देख्ने स्क्रिनमा एउटा सन्देश प्रदर्शन।
अनलक सेवा केन्द्र
निस्सन्देह, तपाईंले कसरी बाहिर समझ छैन भने पनि iPhone 5s खोल्न, तपाईं बस सेवा केन्द्रमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि यी कम्पनीहरु को केही वेबसाइटमा भन्यो, तपाईं उपलब्ध धन को पूर्ण सेट प्रयोग गरेर आफ्नो उपकरणमा अनलक हुनेछ। तर, केन्द्र को मालिकको आफ्नो iTunes र iCloud पहुँच छैन भनेर दिएको, तपाईं फोनको रिकभरी एक धेरै जटिल प्रक्रिया मा हुनेछ भनेर अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। यस कारण, त्यसपछि, कति यो केन्द्र अनुसार फरक हुनेछ, आईफोन 5s अनलक गर्न लागत। अक्सर, कम्पनीहरु 8-10 हजार rubles को लागि यस्तो सेवा प्रदान गर्नुहोस्। यो तपाईंको उपकरण छ, र कुनै एक लागि देख छ भने, त्यसपछि तपाईं भविष्यमा कुनै पनि प्रतिबन्ध बिना यो काम गर्न सक्नुहुन्छ।
सुझाव र चाल
र सामान्य मा - आफैलाई सोच्नुहोस्। खैर, जो प्रश्नको जवाफ देख छ: "यो सम्भव भएको iPhone 5s अनलक छ» त्यो सही - यसको आफ्नै उपकरणमा डाटा (अर्थात् पासवर्ड) हराएको भएकाहरूलाई, र अरू कसैको उपकरण पत्ता लगाउन व्यवस्थित गर्नेहरूलाई, र तिनीहरूले नियुक्त हुनेछ स्वार्थी मनसाय बाहिर छन्? उपकरण। यसलाई के छैन: पछिल्लो सिफारिस नै छ। , अघिल्लो मालिकसँग सम्पर्क तिनीहरूले उपकरण फिर्ता गर्न चाहनुहुन्छ कि उहाँलाई व्याख्या गर्न प्रयास गर्नुहोस्। विश्वास राम्रो कुरा हुन र, हुनेछ मलाई, यो के, तपाईंले टाढा अरू कसैको उपकरण लिन भने भन्दा बढी सन्तुष्ट हुनेछ।
पहिलो (आफ्नो iPhone गर्न पासवर्ड भूल गर्नेहरूका लागि), म होसियार र ध्यान हुन सल्लाह थियो। तपाईं पहुँच कुञ्जी एउटा सवारी लागि लिन सक्दैन र औँला स्क्यानर प्रयोग - यो थप सुविधाजनक र छिटो छ। साथै, तपाईंले कुन पासवर्ड स्थापना गर्न, र प्रश्न सोध्न छैन भूल हुनेछ देखि छैन: "यो सम्भव भएको iPhone 5s अनलक छ»?
अझै यो उपकरणमा व्यक्तिगत सामग्रीको बहाली मा खर्च समय र प्रयास सुरक्षित हुनेछ। यो सबै पछि पनि, भूल छैन - आफ्नो iPhone मा लक थियो सबै डाटा नष्ट हुनेछन्। त्यसैले, तपाईंले आफ्नो मनपर्ने प्लेसूची पुन सङ्कलन गर्न, हुनेछ काम को लागि आवश्यक अनुप्रयोग फाइलहरू अपलोड गर्नुहोस्।
सबै तपाईं छैन र यो गर्न - आफ्नो 5s औंला स्क्यानर प्रयोग!
धातु आवास संग एक विश्वसनीय फोन कहाँ प्राप्त गर्न?
Nokia 5530 Xpressmusic: एक अवलोकन, सुविधा र समीक्षा
स्मार्टफोन Highscreen ओमेगा प्रधानमन्त्री एस: समीक्षा, समीक्षा र मूल्य पुस्तिका
स्मार्टफोन एलजी आत्मा: समीक्षा, समीक्षा, विनिर्देशों, तुलना र वर्णन
IMessage कसरी आईफोन5अन गर्न?
मोबाइल फोन "नोकिया E72": अवलोकन, विशेषताहरु, मूल्य
लाभ र बेफाइदा: को लागि रगत समूह पोषण
टमस Biti - पहिलो गर्भवती मानिस
Avast कसरी असक्षम?
इन्जिन क्लीनर। इन्जिन कसरी धुन? कार रसायन
"DMB": अभिनेता र फिलिम भूमिकाको
जूलिया Vysotsky देखि घर आइसक्रिम नुस्खा। लोकप्रिय टिभी प्रस्तोता उपयोगी सुझावहरू
Sulfated एसिड: सूत्र र रासायनिक गुण
कसरी बिस्तारै पेन्सिल एक बिरालो आकर्षित गर्न। कसरी बच्चाहरु को लागि एक बिरालो आकर्षित गर्न?
भट्टीमा आगो रोक चिनाई को एक मिश्रण: को संरचना र मूल्य। के भट्टियों समाधान को चिनाई को अनुपात?
MEMORY_MANAGEMENT (Windows 10), त्रुटि छ: कसरी समाधान गर्न निर्देशन र सिफारिसहरू
लिपेट्स्क को जनसंख्या: संख्या र रोजगार